भाइरल फोटोमा देखिएका को हुन् सुनको सिक्रीवाला सुकुम्बासी युवक ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
भाइरल फोटोमा देखिएका को हुन् सुनको सिक्रीवाला सुकुम्बासी युवक ?
चितवनको भरपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालसँग पराजित एमाले नेता देवि ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको वि’रोधमा नेकपा एमालेसम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघले बिहीबार गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका एक युवक भाइरल भए।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएका यी युवक मनोहरा सुकुम्बासी वस्तीबाट मूल सडकसम्म निकालिएको जुलुसमा सहभागी थिए। सुकुम्बासीभन्दा युवा संघका नेता कार्यकर्ता बढी रहेको प्रदर्शनमा एक अनलाइनका फोटो पत्रकारले खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
निधारमा कालो फेटा बाँधेका युवाले ‘जमिन त खोसिस् सरकार, नागरिकता पनि खोस् !’ भन्ने नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका छन्।
घाँटीमा सुनको सिक्री लगाएका यी युवकको विषयमा अहिले चर्चा छ । सुकुम्बासीको जुलुसमा सहभागी युवकको गलामा सुनको सिक्री देखिएपछि यो तस्वीर ट्रोल भएको हो।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका घर भएका वीरबहादुर श्रेष्ठ सुमन हुन् उनी। श्रेष्ठ अहिले कोटेश्वर बस्दै आएका छन्। उनले आफू सुकुम्बासी नभई युवा संघमा आवद्ध रहेको र सुकुम्बासीको पक्षमा आवाज उठाउन गएको बताएका छन्।
भूमिसमस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध वा समर्थन गर्नु आफ्नो अधिकार भएको श्रेष्ठको धारणा छ। सुनको सिक्री लगाउने विषय आफ्नो व्यक्तिगत रहेको उनको भनाई छ।
‘म २–४ तोला सुन लगाउँछु, यो मेरो शोख हो, सुन लगाएँ भन्दैमा मैले सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्न पाउँदिनँ?,’ श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरेका छन्।